We Fight We Win. -- " More than Media ": Change or not.
အခြေအနေ ပြောင်းလဲပြီလား ။ မပြောင်းလဲသေးဘူးလား။
တိုးတက်လာသလား။ မတိုးတက်လာဘူးလား လို့မေးလာတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက် ပြောင်းလဲမှု စံညွန်းကို ပြောပြလုိုပါတယ်။
-ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အာဏာကို တဦးတည်းက ကိုင်နေသလား။ အများစုက ကိုင်နေသလား။
ဗဟိုကနေ အာဏာတွေကို ချုပ်ကိုင်ထားသလား။ ပြည်နယ်အစိုးရတွေကို အာဏာခွဲဝေကျင့်သလုံးသလား ။
-အရင်းအမြစ်တွေကို ပြည်သူတွေအတွက် ခွဲဝေစားသုံးသလား။ ပြည်သူတွေအတွက် ရေရှည် စားသုံးနိင်အောင်လုပ်
-အခွန်တွေကို ဘယ်လိုကောက်ခံသလဲ။ အခွန်တွေကို အပြည့်အ၀ကောက်ခံနိင်ပါရဲလား။ အခွန်တွေကို ဘယ်လိုသုံးစွဲပါသလဲ။
အခွန်တွေဟာ ပြည်သူတွေဖွင့်ဖြိုးမှုမှာ တကယ်ထိထိရောက်ရောက်သုံးပါသလား။
-တရားဥပဒေဟာ ပြည်သူတွေအတွက်တကယ်လုံခြုံမှုရှိပါသလား။ မရှိဘူးလား ။
- နိင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်တွေမှာ ပါဝင်ခွင့်ရှိသလား။
-ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်တွေက ပြည်သူတွေအတွက်တကယ်လုပ်ပေးသလား။
-လွတ်လပ်စွာ စုရုံးခွင့်ရှိသလား။ ယုံကြည်မှုအတွက်ထုတ်ဖေါ်နိင်ခွင့်ရှိသလား။
-စီးပွားရေးမှာ တန်တူအခွင့်အရေးရှိသလား။ ပုဂိလိက ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသလား။
စတဲ့အချက်တွေကို ကျနော်တုို့ကြည့်ပြီး
ပြောင်းလဲ နေသလား မပြောင်းလဲနိင်သေးဘူးလား ဆိုတာ ကို စဉ်းစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
Hlut Taw only interested in Dr Seik Phur??????????
Hlut Taw afraid of bank account holders.............